Wazi njani ukuba bendivaliwe kuWhatsApp? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Wazi njani ukuba bendivaliwe kuWhatsApp?
Meyi 7, 2021 0 IiCententarios 451
Kukho iimeko esingazi ukuba ngaba ngumfowunelwa ka-WhatsApp usivalile ngokuqinisekileyo okanye hayi. Ngelishwa, i-WhatsApp ayinayo inkqubo ye-alamu esixelela ukuba kwenzeke into enje.
Ngokungafaniyo noFacebook, kuWhatsApp awazi ukuba bakuthintele okanye cha. Kodwa izinto ezikhoyo zibonakaliso ezincinci ezinokusinika ukuba siqonde ukuba unxibelelwano oluthile Ngaba usithintele kuluhlu lwakho loqhakamshelwano okanye hayi. Ukuba awubazi, siyakumema ukuba uqhubeke usifunda kwaye uzifumanele ngokwakho.
Kodwa ngaphambi kokuba siqale, sifuna ukuba sithathele ingqalelo ukuba kukho ulwazi oluvela kumfowunelwa olunokubonisa enye into hayi loo nto Umntu ukuvimbile. Phakathi kwazo kukho:
Umfowunelwa utshintshe useto lwalo ngendlela yokuba ayenze yabucala
Uqwalaselo olwenzileyo alukuvumeli ukuba ubone okokugqibela xa umnxibelelwano waqhagamshelwa kuWhatsApp.
Umfowunelwa ekucingelwa ukuba usivalile utshintshe useto lwalo ngendlela enokuthi ibonwe kuphela ngabafowunelwa kwaye abanakongeza kuluhlu lwabo lokudibana.
Unxibelelwano lwe-Intanethi ingakwenza intshukumo embi
Umntu ngelo xesha wayeka ukuba nefoto yeprofayili
Zithini iimpawu ezisixelela ukuba umntu usivalile kuWhatsApp?
1. Ukutshekishwa kabini kuyamakishwa
Ukutshekishwa zizinto ezilula kodwa ziyasinceda ukuba siqonde okwenzekileyo kwimiyalezo esiyithumelayo. Kananjalo, uphawu lokukhathaza okanye itsheki isixelela ukuba umyalezo uthunyelwe kodwa loo mntu akawufumenanga. Itshekhi ephindwe kabini isixelela ukuba umyalezo ufunyenwe ngelixa itshekhi eluhlaza okwesibini kuxa umntu ewufundile umyalezo.
Ngoku, xa uthumela umyalezo kwaye loo myalezo awubonakalisi amakhalane amabini okanye ukukhangela, kunokwenzeka ukuba uvaliwe. Nangona besitshilo kumzuzwana odlulileyo, i-intanethi kunye nokunxibelelana kunokudlala nawe.
Kodwa ukuba uyazi ukuba ngumnxibelelanisi ongazisi ngxaki ngokufikelela kwi-intanethi, ke ngu inkcazo yokuba uvinjiwe.
2. Awuvumelekanga ukufowunela loo mntu uqhagamshelana naye
Emva kokuqaphela ukuba itshekhi ephindwe kabini ayivelanga emva kokuthumela umyalezo kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo, ungaqhubeka nokwenza uvavanyo ngokubiza umnxeba lowo. Ukuba awuvunyelwe ukwenza iminxeba, kungenxa yokuba bakuthintele ngaphandle kokukuxelela nantoni na.
3. Unxibelelwano lokugqibela aluveli
Gcina ukhumbula ukuba ukuba uthatha isigqibo sokungabonisi uqhagamshelo lwakho lokugqibela, ngekhe ukwazi ukubona okokugqibela unxibelelwano luqhagamshelwe. Ke, ukuba le yimeko yakho, zama ukutshintsha useto kunye Jonga ukuba olu lwazi alubonakali ngokwenene.
4. Awuvumelekanga ukongeza kwiqela
Ngelixa kuyinyani ukuba ukungabinayo ifoto yeprofayile kubonisa ngokucacileyo ukuba uvinjiwe, ukuze uqiniseke ngayo, zama ukongeza lo mntu kulo naliphi na iqela. Ukuba awukwazi, kuyacaca ukuba kwenzeke ntoni.
1 Zithini iimpawu ezisixelela ukuba umntu usivalile kuWhatsApp?
1.1 1. Ukutshekishwa kabini kuyamakishwa
1.2 2. Awuvumelekanga ukufowunela loo mntu uqhagamshelana naye
1.3 3. Unxibelelwano lokugqibela aluveli
1.4 4. Awuvumelekanga ukongeza kwiqela
Uyazi njani iphasiwedi ye-Facebook?
ULAZI NJANI INANI LAMA-AKHAWUNTI OWALANDELAYO?